Zavatra ho an'ny saka - Noti Cats | Noti saka
Entana ho an'ny saka
Mikasa ny handray saka ve ianao? Avy eo ianao dia mila mividy azy andiana zavatra izay tena ilaina: fandriana, boaty fasika, scratchers, feed, sns sns, mba tena faly aminao izy. Betsaka ny azo isafidianana, ary maro karazana ny mamorona ny sainao haingana! Saingy tsy misy tokony atahoranao: manana ny vahaolana izahay.
eto Izahay dia hilaza aminao momba ny safidy tsara indrindra amin'ireo zavatra samihafa izay ny volonao dia mila amin'ny minitra 0 modia. Ary, raha tsy misy ny mpitari-dalana, azo antoka fa hiafara amin'ny fandaniam-bola fanampiny isika rehetra, ary mandany minitra sy ora maro hanaovana zavatra izay, raha tsy izany dia afaka segondra vitsy.
Saingy, avelao aho hanontany anao zavatra: fantatrao ve izay hovidiana? Tsia? Raha sambany ianao miaina miaraka amin'ny totohondry dia ara-dalàna raha manana fisalasalana maro ianao, ary tsy holazaiko anao akory raha toa ka milaza aminao koa izy ireo fa ny zavatra hitanao indraindray dia tsy manana kalitao tsara araka ny filazany azy. dia.
Goavana ny fifaninanana, ary fantatry ny orinasan-tsoratry ny biby izany, ka hanao izay rehetra azo atao izy - manitrikitrika aho, izy rehetra na saika ny zava-drehetra - mba hividiananao amin'izy ireo fa tsy amin'ireo mpifaninana aminy.
Mora tokoa ny miditra ao amin'ny tambajotran'izy ireo ary mety ho voafitaky ny loko manaitra sy ny vidiny tsy hay tohaina. Vidio, ohatra, ny fandriana saka tsara tarehy iray simba taorian'ny roa andro, na mividiana sakafo izay amin'ny fotoana fohy na antonony dia miteraka olana ara-pahasalamana lehibe. Azo lazaina fa ny misafidy tsara dia tsy resaka tsiro fotsiny, fa koa ny fiadanan'io biby io. iza no hiara-hiaina aminao, antenaina mandritra ny taona maro.
Tsy te hanome azy ny tsara indrindra indrindra ve ianao ary afaka mankafy ny purrs, ny endrika mahafinaritra, ny fangatahana manala baraka ary maro hafa isan'andro amin'ny fiainany rehetra? Manome toky anao aho fa tena azo inoana fa tsy mila manao fitsidihana be loatra amin'ny mpitsabo biby ianao, ary noho izany dia hisoroka ny adin-tsaina amin'ny feline (zavatra izay tsy isalasalana fa misaotra anao, satria tsy mahazaka azy tsara mihitsy izany ary raha ny marina dia mety hanasarotra ny fahaizanao mitondra fiainana ara-dalàna), satria ny vavahady dia manomboka eo amin'ny vavony fa miafara amin'ny ivelan'ny vatana.
Ny allergy amin'ny saka dia lohahevitra iray tena mampiahiahy, fa azonao atao ny misoroka azy ireo
miezaka indrindra hanome anao ny fikarakarana rehetra ilainao amin'ny fiheverana ny anao
ny fivoarana sy ny toetra mampiavaka azy, ary koa mividy zavatra avo lenta ho azy
kalitao, izay hahafantaranao mialoha fa tena hahasoa azy ireo amin'ny fahasalamanao ara-batana sy ara-tsaina.
Ka raha mahatsapa ianao fa vonona na vonona ny hiaina ny fotoana tsara indrindra amin'ny fiainanao miaraka amin'ny biby mazàna saro-kenatra fa, raha voatsabo tsara hatramin'ny voalohany dia mety ho lasa mpiara-miasa tena tsara, Amin'ity fizarana ity dia ho hitanao ireo zavatra rehetra izay mety tsy hita ao an-trano nozaraina amin'ny felines. Ankafizo.
Nutro, sakafo voajanahary ho an'ny saka
Fantatsika rehetra fa, raha misakafo tsara isika, izany hoe, raha mihinana sakafo misy kalitao mifanaraka amin'ny filantsika, ny ...
Fisafidianana fanaka sy fananganana ho an'ny saka
Ireo volom-borona izay miara-monina amintsika dia mila fanaka sy rafitra maromaro ho an'ny saka hahafahany ...
CatIt, vokatra natao ho an'ny saka
Ny saka dia iray amin'ireo biby fiompy malaza indrindra dia zava-misy, saingy marina ihany koa fa ...
Torolàlana momba ny fividianana boaty fanadiovan-tena ho an'ny saka
Impiry isan-kerinandro ianao no miteny hoe "tsy manam-potoana aho"? Angamba maro, tsy very maina, ny fomba fiainana izay ...
Ahoana no hividianana kitapom-batsy ho an'ny saka?
Te ho afaka hitondra ny alikanao volo ve ianao handehandeha nefa tsy mila manao fehikibo na fehy? Vitanao io…
Torolàlana momba ny fividianana saka saka
Ireo volom-borona dia maniry hiditra amin'ny zoro tsy ampoizina indrindra, fa ahoana kosa ny fanomezana azy ireo ho fanampin'ny ...
Ahoana ny fomba hisafidianana varavarana ho an'ny saka?
Manana zaridaina na patio sy volom-borona sasany ve ianao izay tia mandany fotoana any? Raha izany dia mividiana ...
Mety ve ny manome Royal Canin ny saka?
Iza no tsy mahalala ny marika Royal Canin? Mora tokoa ny mahita ny sakafonao amidy any amin'ny magazay fivarotana biby, ...
Ahoana no hividianana vozona parasy ho an'ny saka?
Tsy misy zavatra mampitebiteby kokoa ho an'ny lehilahy volom-bolo hahatsapa ny fomba fitsidihan'ny katsentsitra vitsivitsy ny volony sy ny fanindronany ...
Torolàlana momba ny fividianana sakafom-saka saka mandeha ho azy
Amin'izao fotoana izao, ny olona izay miaina miaraka amin'ny biby volom-borona ary mandany fotoana be lavitra any an-trano koa dia manana ...
Ahoana no hividianana borosy saka?
Iza no tia manana volo volo manodidina ny trano? Ekeko fa tsy tiako ny mahita ...